ဇူလိုင်မနက်ခင်း၏ … မိုးစက်များကြားမှ အလွမ်းသံစဉ် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 22, 2009, 2:06 am
this is really nice post….. about love,
but i couldnt feelafamily here after ready it… may be there isablank that u guys hevnt fill in yet… 😉
Comment by သက်ပိုင်သူ July 22, 2009 @ 4:19 am
ကိုသက်ပိုင်သူ >> ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်။ ကြည့်ရတာ .. ကိုသက်ပိုင်သူလည်း တူ ၊ တူမလေးတွေကို မြင်ချင်ပြီနဲ့တူတယ်။ လာမှာပေါ့ .. ခဏတော့နေပါဦး 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် July 22, 2009 @ 4:26 am
Comment by thandar kyaw July 22, 2009 @ 4:37 am
Comment by suburbanian July 22, 2009 @ 4:43 pm
Deeply attack to heart. Wish u and ur lover happy…….eternally
Comment by Hnin July 24, 2009 @ 6:37 am
ညီမလေး လွမ်းနေတာလား… ချစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အလွမ်?ဆိုတာလည?း တွဲ?ါ?ာတ?်တာပါပဲ။
Comment by GreenGirl July 25, 2009 @ 2:25 am
အချစ်က တကယ်ပဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့..ဟုတ်လား သူငယ်ချင်း။
နောက်လဲ လာလည်ပါဦးမယ်။ ငါ့ဘလော့ခ်လဲ အားရင်လာလည်ပါဦး။
Comment by Lyn Lyn July 25, 2009 @ 2:46 am
လင်းလတ်ရေ….ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို အမြန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ….
Comment by နှင်းဟေမာ July 25, 2009 @ 8:51 am
Lyn Lyn >> သူငယ်ချင်းရေ “အချစ်”က လူကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ နင်လည်း သိချင်ရင် ချစ်သူထားကြည့်ပြီး အမြန်လက်တွဲပေါ့ 😛
မနှင်းဟေမာ >> ကျေးဇူးပါရှင်။ လက်ရှိမှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ကျေနပ်မိပါတယ်။ ကိုသက်ပိုင်သူ ထင်သလို မိသားစုဆိုတာ (၃)ယောက်မှ ခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ မိသားစုဆိုတာ (၂)ယောက်က စတင်တာမို့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးရင် “မိသားစု”လို့ ခေါ်ခွင့်ရှိပါပြီရှင်။ Btw, ကျွန်မနာမည်က “လင်းလက်ကြယ်စင်”ပါရှင်။ ကကြီးနဲ့ “လက်”ပါတယ်။ ဘလော့ခ်ဘန်နာမှာ မြန်မာလိုပေါင်းပြထားပါတယ်ရှင်။ Shining Star လို့ အမည်ပေးထားတာပါ 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် July 27, 2009 @ 1:04 am
Comment by PAUK July 29, 2009 @ 2:56 pm
one thing u should understand asablogger is that when u give credits to others for photo or pic or anything, u should not give credit to google.
u should understand that google is justasearch engine which search the data for u. so u should give credits to rightful owners.. not google..
why do i hv to explain this?
Comment by Anonymous August 7, 2009 @ 4:02 pm
Comment by Lynn Nay Ko August 8, 2009 @ 4:37 am
Anonymous >> ဒါက ရှင်ပြောမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ချစ်စရာပုံလေးတွေမြင်တဲ့အခါ သိမ်းထားမိပြီး နောင်တစ်ချိန် .. သင့်တော်သော အကြောင်းအရာမှာ ပုံကိုထည့်တဲ့အခါ လင့်ခ် ပြန်ရှာရန် အချိန်မရလို့ အဆင်ပြေသလို credit ပေးထားတာပါ။ တခါတည်းရှာပြီး သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ လင့်ခ်ကို အမြဲချိတ်ပေးပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ရှင်တစ်ယောက်တည်း သိတာမဟုတ်ပါဘူး။ “မြန်မာ ဘလော့ခ်ဂါ”တွေဆိုပြီး မသုံးပါနဲ့။ အားလုံးက သူလိုကိုယ်လို လူတွေချည်းပါပဲ။ လူတော်တွေ မဟုတ်ရင်တောင် ငတုံးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ feedback ပေးသောနေရာမှာ “စေတနာ” နှင့် “အပြစ်ပြော ဆရာလုပ်ခြင်း” လေသံက ကွဲပြားတာကို သေချာပိုမိုလေ့လာဖို့ ပြန်လည်အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ Haveagood day 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် August 8, 2009 @ 5:32 am
if its the case, then u hve to explain this properly. u should not do it so carelessly – to give credits to google inavery agnorant way.
Comment by Anonymous August 9, 2009 @ 8:50 am
လင်းလက်ရေ…လာလည်သွားပါတယ်။ အသစ်တွေတင်ဖို့အချိန်မအားဘူးထင်တယ်နော်။ အားတဲ့အခါငါ့ဆီလဲ လာလည်ပါဦး။
Comment by Lyn Lyn August 13, 2009 @ 12:36 pm
Comment by မေအိခင် (လယ်ဝေး) August 17, 2009 @ 7:35 am
Comment by မေအိခင် (လယ်ဝေး) August 17, 2009 @ 7:36 am
သမီးပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်းနူးစရာလေးးးအန်တီကတော့ အမြဲသတိရလျှက်ပါ…..တကယ့်မိသားစုလေး ပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့….
Comment by ခင်မင်းဇော် August 19, 2009 @ 2:17 pm
တခါမှတော့မဖတ်ဘူးပါဘူး…ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်း မသိပါထိုဋ္ဌေကာင့် ဆွေးနွေးစရာမရှိပါ….this is my first and last time visit to this blog.
Comment by Anonymous August 22, 2009 @ 3:43 pm
Comment by Anonymous September 8, 2009 @ 4:20 am
Comment by wynntar September 18, 2009 @ 6:42 pm
အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့သူတွေအတော်များများဆီကကြားရတာ စိတ်ညစ်စရာတွေ… စိတ်ကုန်စရာတွေ.. နောက်.. အိမ်ထောင်ပြုတာပဲ တကယ့်ဒုက္ခဘုံထဲဆင်းမိသလိုမျိုး သင်္ခန်းစာပေးကြတာချည်းပဲ။ ဒီစာလေးဖတ်ရတာ ကဗျာဆန်လိုက်တာ။ တကယ်တော့ အိမ်ထောင်တခု ပျော်ရွင်ခြင်း.. ပျော်ရွင်မှုမရှိခြင်းဆိုတာ.. တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လို အပေးအယူရှိကြလဲ.. နားလည်မှုပေးနိုင်ကြလဲ.. နောက်.. ဘယ်လောက် ချစ်ကြလဲပေါ့လေ.. အဲဒါတွေနဲ့ အများကြီးဆိုင်မယ်ထင်တယ်နော်.. .. လင်းလက်ကြယ်စင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ တသက်လုံး နေသွားနိုင်ပါစေလို့.. ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
Comment by Anonymous October 15, 2009 @ 8:51 am